က်မ္းစာေလ့လာျခင္း | Rev.U Min Lwin
ယနေ့တိုင်ပျက်စီး ပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ
Posted in: က်မ္းစာေလ့လာျခင္း.	Tagged: အေထြေထြ.	Leaveacomment
ကမ္ဘာဦးကနေ ယနေ့တိုင် တည်ရှိနေသော အချက်(၁၀)ချက်ကို ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ ဒီအချက်တွေဟာ ယနေ့တိုင်ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းမရှိသေးတဲ့ အချက်တွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ကျမ်းစာထဲမှာ အဖြေရှိနေသေးတယ်။
(၂) ယနေ့တိုင် ဆုတောင်းခြင်းကို အဖြေပေးနေသေးတယ်။
(၃) သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်သည် ယနေ့တိုင် အလုပ်လုပ်နေသေးတယ်။
(၄) ဘုရားသခင်ဟာ ယနေ့ထက်တိုင် ယုံကြည်သူတွေရဲ့ ချီးမွမ်ခြင်းကို ခံယူခြင်သေးတယ်။
(၅) ဘုရားသခင်ဟာ တရားဒေသနာများ (နှုတ်ခပတ်တော်)ကို ယနေ့တိုင် ဘိသိတ်ပေးနေသေးတယ်။
(၆) ယုံကြည်သူတွေရဲ့ အသက်တာထဲမှာ ချီးမွမ်းခြင်းသီချင်း (ချီးမွမ်းစရာ) များ ရှိနေသေးတယ်။
(၇) ဘုရားသခင်ဟာ သူ့ရဲ့ လူမျိုးတော်များကို ယနေ့ထက်တိုင် ကောင်းကြီးသွန်းလောင်နေသေးတယ်။
(၈) ကားတိုင်းတော်တရားဟာ ယနေ့ထက်တိုင်အရေးကြီးသောအခြေအနေတွင် ရှိနေသေးတယ်။
(၉) သခင်ယေရှုဟာ ယနေ့တိုင် သင့်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အပြည့်အ၀ ရှိသေးတယ်။
(၁၀) သခင်ယေရှုဟာ သင့်ကို ယနေ့ထက်တိုင် ပျောက်ဆုံးသူများကို ကယ်တင်နေသေးတယ်။
အဲဒါကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုဘို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Posted in: က်မ္းစာေလ့လာျခင္း.	Tagged: အသက္တာ.	Leaveacomment
”သင်တို့သည် အမျိုးမျိုးသော မနာလိုမှုကို ပယ်ကြလော့”(၁ပေ ၂း၁)။
မနာလိုခြင်း၊ ငြူစူခြင်း၊ မလို မုန်းထားခြင်း (Jealousy, Envy) စိတ်ကို ပယ်ကြဖို့ သမ္မာ ကျမ်းစာတွင် တမန်တော် ရှင်ပေတရု အားဖြင့် သွန်သင် သတိပေး နေသည်(၁ပေ ၂း၁)။ အဆိုပါ စိတ် သဘောထား နှင့် မည်မျှ ကင်းရှင်း ကြပြီလဲ ဆိုသည့် မေးခွန်းကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေး ကြည့်ကြဖို့ လိုပါသည်။ ပညာရှင် များက ဤသို့ ဆိုသည်။ ”လူသည် ဝေဖန်ရေး ရှိမှ တိုးတက်နိုင်သည်။ သို့ သော် ဝေဖန်ရေး လုပ်သည့်အခါ သတိချပ်စရာ ရှိပါသည်။ သူတစ်ပါးကို ဝေဖန်သည့် အခါ မညှာ မတာ ဝေဖန်တတ် ကြပေမယ့် မိမိကိုယ်ကို ဝေဖန်မှု (Sulf Critism) ပြုသည့်အခါ သက်သက်ညှာညှာ ဝေဖန်တတ်ကြသည်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ မိမိ ကိုယ်ကို အားမနာ တမ်း ဝေဖန်ရေး လုပ်ဖို့လိုပါမည်။
ဆေးပညာ ရှုထောင့်အရ စိတ်တည်ငြိမ်မှု မရှိလျင် ရောဂါ ရတတ်သည် ဟု ဆိုသည်။ မနာလို စိတ်ရှိ နေလျင် စိတ်တည်ငြိမ်မှု ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ လူတိုင်း ကျန်းမာစွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့ ၀ိတိုရိယ ကြေငြာ စာတမ်း မှာပါတဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေခံ အုတ်မြစ်ကြီး (၄)ရပ်ကို ချမှတ်ထားသည်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်၊ အရက်လျော့ပါ။ (လုံးဝမသောက်ပါကသာ၍ကောင်း၏။ စာရေးသူ။)
စိတ်နေ သဘောထား တည်ငြိမ်မျှတပါ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
မနာလိုခြင်းသည် ဤ စတုတ္ထ အချက်ကို ချိုးဖောက်နေသည် ဖြစ်၍ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှာ မုချဖြစ်သည်။
မာသာ ဘတ်စီလယာ ရှာလဇ်ခိက ”လူတစ်ဦး တစ်ယောက်၏ စိတ်နှလုံးထဲ၌ မနာလိုမှုသည် အလွန် ပူလောင် ပြင်းပြသော ဆန္ဒဖြစ်လာ သောအခါ ထိုစိတ်ထားက ဤလူကို တွန့်လိမ် ကောက်ကွေး သွားစေ နိုင်ပေသည်”ဟုဆိုသည်။
သမ္မာ ကျမ်းစာထဲက ပုဂ္ဂိုလ် အချို့၏ အဖြစ်အပျက် များအားဖြင့်လည်း သင်ခန်းစာ ယူရန် ရှိပါ သည်။ မောရှေကို ဘုရားရှင်က ချီးမြှောက်ခြင်း အတွက် အာရုန်နှင့် မိရိအံသည် မနာလို ပြစ်တင် ဝေဖန် ပြောဆို ခဲ့ကြသည်။ မောရှေကို ပြစ်တင် သဖြင့် မိရိအံ၌ နူနာစွဲသည်ကို အာရုန် မြင်လာသည့် အခါ မိမိ အမှားကိုဝန်ခံ လျက် သူမ အနာပျောက်ဖို့ ဆုတောင်း ပေးခဲ့သည်။ (ထွက် ၁၂)။
အာရုန်က မောရှေ၏ မြင့်မားသော ခေါင်းဆောင် နေရာရမှု အပေါ်မနာလို ဖြစ်သည့် နည်းတူ အာရုန်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း အဖြစ် နေရာရမှုကို လေ၀ိအမျိုးသား ကောရ၊ ရုဗင်အမျိုး ဒါသန်နှင့် အဘိရံတို့သည် မနာလိုဖြစ်၍ ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြရာ သူတို့ကို ဘုရားရှင် ဖျက်ဆီး ပစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကို ထောက်ခံ အားပေးသော ပရိသတ် များ၌ ဘေးဥပဒ် ကျရောက်ခဲ့ရာ အာရုန်သည် သူတို့အတွက် ဆုတောင်း ပေးခဲ့၍ ထိုဘေး ငြိမ်းခဲ့၏။(ထွက် ၁၆)
ကာဣနနှင့် အာဗေလ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် အကြောင်းကို ကြည့်သည့် အခါ ကာဣနသည် ညီ အာဗေလကို သတ်ခဲ့သည်။ ကာဣန၏ မနာလို မုန်းတီးမှုသည် မကောင်းမှု ဒုစရိုက်သို့ ပြောင်း လဲ သွားခဲ့လေပြီ။
ထိုအပြစ်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ကျိန်ခြင်းကို အာဗေလ ခံရသည်။ (ကမ္ဘာ ၄း၈-၁၂)။ ယောသပ် အဲဂုတ္တု ပြည်သို့ ရောင်းစား ခံရခြင်းသည်လည်း အစ်ကိုများ၏ မနာလိုမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ (တ၇း၉)တွင် ‘အမျိုး၏ အဘတို့ သည်လည်း ငြူစူသော စိတ်ရှိ၍ ယောသပ်ကို အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ရောင်းလိုက်ကြ၏’ဟု မှတ်တမ်းတင် ထားသည်။
ဖာရိရှဲများနှင့် လူအချို့တို့သည် သခင် ယေရှု ပေါ်ထွန်း လာသောအခါ သူတို့၏ ထင်ပေါ် ကျော်စောခြင်း၊ အလေးပေး ခံရခြင်း များကို မိမိတို့ ထံမှ လုယူသွားသည်ဟု ယူဆကြသည်။ ထိုသူတို့သည် မနာလို စိတ်ကြောင့် ယေရှုကို အပ်နှံကြောင်း ပိလတ်မင်း သိသည်။ (မ ၂၇း၁၈)တွင် ‘အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ မေးသနည်း ဟူမူကား ထိုသူတို့သည် မနာလိုစိတ်နှင့် ယေရှုကို အပ်နှံကြောင်းကို ပိလတ် မင်းသိ၏’ဟုတွေ့ရသည်။ (မာ ၁၅း၁၀) တွင်လည်း ‘အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ မေးသနည်း ဟူမူကား ယဇ်ပုရောဟိတ် အကြီးတို့သည် မနာလို သောစိတ်နှင့် ယေရှုကို အပ်နှံကြောင်းကို သိ၏’ဟု တွေ့ရသည်။
မနာလိုစိတ်သည် အဘယ်မျှ အန္တရာယ် ကြီးမားသည်ကို တွေ့ရကြပြီ။ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲသို့ မ၀င်နိုင်သော အပြစ်များ အနက် မနာလိုခြင်းလည်း အပါအ၀င် ဖြစ်သည် (ဂလာတိ ၅း၂၀)။ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းသော အနာဂတ် ကို ရင်ဆိုင်ရမည်။ ထာဝရ ကာလတွင် ခရစ်တော်နှင့် အတူ နေထိုင် လိုပါက မနာလို သောစိတ် လုံးဝ မရှိရပါ။ (၁ပေ ၂း၁)တွင် တမန်တော် ရှင်ပေတရု ၏ သတိပေးချက်ကို အလေးအနက် ထားရပါမည်။ တမန်တော် ရှင်ပေါလုကလည်း(၁ကော ၃း၃)တွင် ‘ယခုပင်လည်း ဇာတိပကတိ လူဖြစ်ကြသေး၏။ အချင်းချင်း ကွဲပြားသည် ဖြစ်၍ သင်တို့သည် ဇာတိ ပကတိလူ ဖြစ်ကြသည် မဟုတ်လော့’ ဟု သတိပေး ထားပါသည်။
မာသာ ဘတ်စီလယာ ရှာလဇ်ခိက မနာ လိုစိတ်သည် ကျေးဇူးမတင် တတ်၍ ဖြစ်လာသည် ဟုဆိုသည်။ မိမိ ဘ၀၏ အကောင်း အဆိုး အားလုံး အတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်း တတ်ရမည်။ ထို့အပြင် သူတစ်ပါး၏ အောင်မြင် မှုကိုလည်း ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်း နိုင်ရမည်။ ထိုအခါ မနာလိုစိတ်များ ပပျောက်သွားမည်ဖြစ်ဟုဆိုသည်။
ထာဝရခရီးသည်များဖြစ်ကြသော ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်တာသည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ ပုံသက်သေ ယူရာ ဖြစ်စေလျက် ဘုရားရှင်၏ မှတ်တမ်း၌ ကောင်းသော အရာများ ရှိစေဖို့ရန် မိမိ ကိုယ်ကို သမ္မာ ကျမ်းစာ၏ သွန်သင် ဆုံးမ ထားချက်နှင့် အမြဲ ချိန်ထိုး သတိပြု ဆင်ခြင်ဖို့ ‘သတိမမူ ဂူမမြင်၊ သတိမူက ဂူကိုပင်မြင်၏’ ဆိုသည် စကားပုံ အတိုင်း သမ္မာ သတိရှိကြပါစို့ ဟူ၍ ခွန်အားပေးတိုက် တွန်းလိုက်ရပါသည်။
ရှိသမျှကို ကိုယ်တော့်ထံ အပ်နှံ
Posted in: က်မ္းစာေလ့လာျခင္း.	Tagged: ဟႏၷ, အပ္ႏွံ, ေပးလွဴ.	Leaveacomment
စစ်သူရဲ ယောရှု သေဆုံးပြီးနောက် ဣသရေလ လူမျိုးများသည် ဂတိတော် နယ်မြေသို့ ချီတတ် သိမ်းပိုက်ကြလေသည်။ ထိုလူမျိုးကို တရားသူကြီးများက ခေတ်အဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်ခဲ့ ကြလေသည်။ နောက်ဆုံး ပရောဖတ် ရှမွေလ လက်ထက် တိုင်အောင်ဖြစ် သည်။ နောက်ဆုံး ပရောဖတ်ဖြစ်သော ရှမွေလသည် သူ၏ အသက်ရှင်မှု သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် ဘုရားသခင်ကို ဆက်ကပ် အပ်နှံလျှက် အသက်ရှင်လျှောက်လှမ်းသွားလေသည်။ အကြောင်းမှာ ရှမွေလ၏ မိခင်က သူမမွေးခင်ကပင် ဘုရားသခင်ကို ဆက်ကပ် အပ်နှံခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာကပင် မိခင်နှင့် ဘခင်တို့သည် ကလေး ရရှိနိုင်ရန် ကြိုးစား အားထုပ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က သူမကို သားသမီး မွေးဖွားခွင့် မပြုခဲ့ပေ။ နှစ်အတန် ကြာအောင် သူမ၏ သားသမီး ရတနာ ရလိုသော ဆန္ဒ မပြည့်ဝ ခဲ့သောကြောင့် ဟန္န၏ ဘ၀ အသက်ရှင်မှုသည် အဓိပ္ပါယ် မရှိဖြစ်လာ ခဲ့ပြီး၊ လူအများက ရှုံ့ချစရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ညှိးငယ် ၀မ်းနည်းစွာ ဖြင့် မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင် ကျကာ ငိုယိုကာ ဆုတောင်း ခဲ့တော့သည် (၁ရာ ၁း၁၀)။ နောက်ဆုံးတွင် ဟန္နသည် စိတ်နှလုံး ညွတ်ပြောင်း နုညံ့စွာဖြင့် သားရမည် ဆိုပါက ဘုရားသခင်ထံ ပေလှူ အပ်နှံပါမည်ဟူ၍ ဆုတောင်း ပဌနာ ပြုလေတော့သည်။ “အို ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အရှင် ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်၏ ကျွန်မကို ကြည့်ရှု အောက်မေ့သဖြင့်၊ သားယောင်္ကျားကို ပေးသနားတော်မူလျှင် သူ၏ ဆံပင်ရိတ်ခြင်းကို အလျှင်းမပြု။ တစ်သက်လုံး ထာဝရဘုရား၏ ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းငှါ ကျွန်မအပ်ပါမည်ဟု သစ္စာကတိပြုလေ၏။ (၁ရာ ၁း၁၁)။ ဘုရားသခင်သည် ဟန္န၏ သစ္စာကတိကို အားရ ၀မ်းမြောက်မှု ရှိခဲ့ပုံရသည်။ နောက် မကြာမည်မှာပင် သူမသည် ကိုယ်ဝန် ရှိလာ ခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် ရှမွေလလေးကို မွေးဖွားပြီး မကြာမှီ မှာပင် ထိုကလေးကို ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး ဧလိထံ ပို့ဆောင် အပ်နှံလေတော့သည်။
၁ ရာ ၁း၂၇-၂၈ တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ “ထိုအခါ ဤသူငယ်ကို ရမည်အကြောင်း ဆုတောင်းပါ၏။ တောင်းသည့်အတိုင်း ထာဝရဘုရားသည် ပေးသနားတော်မူပြီ။ ထိုကြောင့် ကျွန်မသည် သူ့ကို ထာဝရဘုရားအား ငှါးပါပြီ။ သူသည် တသက်လုံး ထာဝရ ဘုရားထံတော်၌ အငှါးခံ၍ နေရပါမည် သခင်ဟု လျှောက်ပြီးမှ၊ ထိုအရပ်၌ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကွယ်ကြ၏။
ဟန္နသည် သူမ ဆုတောင် သစ္စာပြု နေချိန်တွင် သူမ၏ ကြီးမားသော ဆန္ဒနှင့် လိုအပ်ချက် ဖြစ်သော်လည်း အမှန်တကယ် စိတ်ရင်း နှလုံးသားမှာ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်နှင့် အမှုတော်အတွက် ပိုမိုစိတ်အားကြီးခဲ့ပါသည်။ သူမ၏သားကို ဘုရားသခင်ထံတွင် ပြန်လည် ပေးအပ်လိုသောစိတ်ဆန္ဒက ပိုမိုအားကြီး ခဲ့ပါသည်။ ထိုစိတ်ဆန္ဒကြောင့်ပင် ဘုရားသခင် ပိုမိုကောင်းကြီးပေးခဲ့သည်ကို မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ (၁ရာ ၂း၂၁) တွင် “ထာဝရ ဘုရားသည် ဟန္နကို အကြည့်အရှု ကြွလာတော်မူသဖြင့်၊ သူသည် ပဋိသန္ဓေယူ၍ သားသုံးယောက်၊ သမီး နှစ်ယောက်တို့ကို ဘွားမြင်လေ၏”။ ဤနေရာတွင် သတိထားရမည်မှာ ဘုရားသခင်သည် ဟန္န၏ သစ္စာ အဓိဌါန်ကြောင့် ကောင်းကြီးပေးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင် မည်သည့်အခါမှ အပေးအယူလုပ်ဘို့ မစဉ်းစားပါနှင့်။ ဟန္နကို ဘုရားသခင်က ကောင်းကြီးပေးရသည်မှာ သူမ၏ မှန်ကန်သောနှလုံးသားနှင့် ဘုန်းတော်ထင်ရှားရန်နှင့် အမှုတော်ကျယ်ပြန့်ရန်ကိုသာ ဦးထိပ်ပန်ဆင် စဉ်းစားခဲ့သော ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့၏ အသက်တာထဲတွင် ဟန္န၏ အမြင် ရှုထောင်မှ တွေးခေါ်ဆင်ခြင်ကာ အရာခပ်သိမ်းကို စဉ်းစားဆင်ခြင် သင်ယူလေ့လာသင့်ပေသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ အစွမ်းအစ ခွန်အား၊ ကြိုးစား အားထုပ်မှုများမှာ မည်သည့်အရာကိုမျှ လုပ်ဆောင် ဖန်တီး နိုင်ခြင်းမရှိချေ။ ကျွန်တော်တို့တွင် ရှိသမျှ ပိုင်ဆိုင်သမျှ အရာအားလုံးသည် ဘုရားသခင် ပေးသနားတော် မူသောကြောင့်သာ ရရှိနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ အရာ ခပ်သိမ်း ဆိုရာတွင် ကျွန်တော်တို့၏ အလုပ်အကိုင်၊ ပညာအရည်အချင်း၊ စီးပွားရေး၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ဆုကျေးဇူး၊ သားသမီး၊ အစရှိသော အရာဟူသမျှ ပါဝင်နေပါသည်။ အရာခပ်သိမ်းကို ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ခံစားရယူနိုင်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို မိမိ၏လုပ်ဆောင်ကြိုးစားမှုကြောင့် ရရှိခံစားရသည်ဟု ဆိုသူများသည် ၀ါကြွားမှု အပြစ် ကျူးလွန် နေကြသူများသာဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည် ရှက်ဖွယ်လိလိ ဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်ပေးသည် ဆိုသည်သော အမှုအရာကို ၀န်မခံနိုင်ဘဲ၊ ရှောင်ဖယ် နေသူများသာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကို ပေးထားသော ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများမှာ ဘုရားသခင်က ရည်ရွယ်များဖြင့် ပေးသနား ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမှုတော်နှင့် ဘုန်းတော် ဆိုသော အရေးကြီးသောအရာကို လစ်လျူရှုထားပါက (သို့) ဘုရားသခင် ပေးထားသော အရာများကို မိမိ၏ ကိုယ်ကျိုး အတ္တနှင့် အသွေးအသား ပျော်ရွင်မှု ဇာတိကို ဦးစားပေး ထားပါကကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့သည် ပေါ့ပျက်သော ဘ၀အနှစ်သာရများကို ခံစားရပေလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ ကောင်ကင်ဗိုလ်ခြေ ထာဝရ ဘုရားကို သူပေးထားသည့် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာ များနှင့် ပြန်လည် ကောင်းကြီး ပေးကြပါစို့။ ဘုရား သခင်ထံ ထိုကောင်းကြီး မင်္ဂလာ များကို ပြန်လည် ပို့ဆောင်ကာ သူ၏ ဘုန်းတော် ထင်ရှားမှုကို ရှာဖွေလုပ်ဆောင်ကြပါစို့။ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်မြတ် ကျယ်ပြန့်စေရန် မိမိ ခံစားရသော ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများဖြင့် ပါဝင်ကြပါစို့။ သူသည်လည်း ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်လည် ကောင်းကြီးပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုကောင်းကြီး များသည်လည်း ဘုရားသခင်အတွက်သာ ဖြစ်စေရမည်ဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်ကာ ဆုတောင်ကြပါစို့။
ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားတဲ့ ဒါဝိတ်
ဣသရေလလူမျိုးတို့၏ ရှင်ဘုရင် ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်သည် ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် တွေ့သောသူ ဟူ၍ အခေါ်ခံခဲ့ရ ပါသည်။ ၁ရာ ၁၃း၁၄ တွင် ရှမွေလက ရှောလုကို ပြောသည်မှာ သင်ဟာ မိုက်မဲသော အမှုကို ပြုပြီ၊ သင်ဟာ ဘုရားသ ခင်ရဲ့ ပညတ်တော်တွေကို မစောင့်ရှောက်ဘူး။ အခုတော့ ဣသရေလနိုင်ငံဟာ အရှည်တည်တံ့လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်း ရဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့ တည်တံ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ထာဝရဘုရားသည် စိတ်နှလုံးတော်နှင့်ညီညွတ်သောသူကို ရှာတော်မူ ၏။ ထိုသူသည် လူမျိုးတော်ပေါ်မှာ မင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူပြီ။
ဒါဝိတ်ဟာ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်စေရန်အတွက် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် ဘိဿိတ်ပေးထားသောသူ ဖြစ်သည်။ ထိုအရာ သည် သူအပေါ်တွင် ဘုရားသခင်ထားရှိတော်မူသော အကြံအစည်တော်ဖြစ်သည်။
ဒါဝိတ်ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ စိတ်တော်နှင့် တွေ့သောသူဖြစ်စေဘို့ အများကြီး သင်ယူခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဝိတ်ဆိုတဲ့ ကောင်း ကလေး ဘ၀မှာပင် မိသားစုထဲ၌ ဘုရားစိတ်တော်နှင့် တွေ့စေသည့် ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ဆိုင်သော သင်ခန်းစာ များကို စတင်သင်ကြားခဲ့ရသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် နှလုံးသားခြင်း ထပ်တူဖြစ် ရင်နှီးစွာ ထိတွေ့မှုများကို သင်ယူခဲ့သည်။
သိုးထိန်းဒါဝိတ်အဖြစ် သိုးများနှင့်အတူ တောင်ကုန်း တစ်နေရာမှ စားကျက်ထဲတွင် အချိန်နာရီ ပေါင်း မြောက်မြားစွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် သူ၏ ၀ိညာဉ်သည် ၀ဲလွင့် မျောပါလျှက် စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ လွင့်မျောကာ ဘုရားသ ခင် ကို ချီးမွမ်းခြင်း အမှုများ ပြုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းသီချင်းများ သီကုန်းရေးစပ်ကာ သီဆိုချီးမွမ်း၍ ဘုရားသ ခင်နှင့် အနီးကပ်ဆုံး အနေအထား တွင် ရှိခဲ့သည်။ ထိုသီချင်းများသည် ဂျူလူမျိုးများ၏ ချီးမွမ်းခြင်း သီချင်းများ ဖြစ်လာ ခဲ့သည်။ ဒါဝိတ်ဟာ သူရဲ့ ချီးမွမ်းခြင်း သီချင်းများကို သီဆိုချီမွမ်းပြီး ဘုရားသခင်ထံ ချဉ်းကပ်တိုးဝင်ခြင်းဖြင့် ဤ စင်္ကြာဝဠာကြီး၏ ဘုရားသခင်နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေသော နည်းလမ်းတခုဖြစ်ကြောင်း ပို၍ပို၍ သိရှိနားလည် လာခဲ့သည်။
အိုး ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်၏ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ကိုယ်တော်ကို ကျိုးစား၍ ရှာပါ၏။ ရေမရှိ သွေ့ခြောက် သော လွင်ပြင်၌ အကျွန်ုပ်၏ ၀ိညာဉ်သည် ကိုယ်တော်ကို ဆာငတ် ပါ၏။ အကျွန်ုပ် ကိုယ်ခန္ဓာသည်လည်း ကိုယ်တော်ကို လွမ်းစွတ်ပါ၏။ ဘုန်းတန်ခိုး အာနုဘော် တော်ကို မြင်ခြင်းငှါ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်၌ ထိုသို့ ကိုယ်တော် ကို ဖူးမျှော်ပါပြီ။ ကရုဏာတော်သည် အသက်ထက် သာ၍ကောင်းသောကြောင့် အကျွန်ုပ်၏ နှုတ်သည် ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းရပါမည်။
ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် တွေ့သောသူအဖြစ် ဒါဝိတ်သည် ဘုရားသခင်နှင့် မည်ကဲ့သို့ရင်းနှီး နိုင်မလဲ ဆိုသည့် အချက်ကို အမြဲတမ်း သင်ယူခဲ့သည်။ သိုးများကို ထိန်းကျောင်းနေရသော သိုးထိန်းတစ်ယောက်အနေဖြင့် သူကိုယ်တိုင် ဘုရားသခင်၏ သိုးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ ခံစားကြည့်သည်။ ဆာလံ ၂၃ တွင် သူကိုယ်တိုင် ဖော်ပြထားသည်မှာ ထာဝရဘု ရားသည် ငါ၏ သိုးထိန်း ဖြစ်တော်မူ၏။ ငါ၌ ဆင်းရဲမခံရ။
ဘုရားသခင်သည် သူ၏သိုးတော်စုအတွက် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လိုအပ်သော အဟာရကို ကျေနပ်လောက်အောင် ကျွေးမွေး ခဲ့သည်။ သူတို့သည် လိုလေသေးမရှိ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ပြည့်ဝစွာ သွန်လောင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ သိုးထိန်း ဒါဝိတ်အနေဖြင့် သူသည် သူ၏နိုင်ငံသားများကို သိုးထိန်းကောင်း ပီသစွာ စောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်ကို တွေ့ရှိစေရန် လမ်းပြသွန်သင်ခဲ့သည်။ သူသည် ဣသရေလ နိုင်ငံသားများကို ဘုရားသခင်ထံ ပြန် လည် လာစေရန် အသံပြုပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာတော်ကို ရှာဖွေရန် လူကြီးလူငယ် အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံး စံပြနမူနာ အဖြစ် အသက်ရှင်ပြခဲ့သည်။